HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Ahanta Aja Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Attié Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gitonga Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guna Guéré Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabuverdianu Kabyle Kambôdzianina Kannada Kaomaorianina (Ngazidja) Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laosianina Latgalian Lenje Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mangareva Maninkakan (Atsinanana) Mapudungun Marathe Marquisien (Hiva Oa) Marquisien (Nuku Hiva) Marshall Masedonianina Maya Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Niue Norvezianina Nuer Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Pilagá Poloney Ponape Portogey Pular Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rutoro Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Susu Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tailandey Avaratratsinanana Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Urhobo Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Olona maro no tsy miangona intsony, satria tsy tena manampy azy eo amin’ny fiainany ny zavatra ampianarin’ny fivavahany sady tsy mampahery azy. Inona anefa ny soa horaisinao raha manatrika ny fivorianay Vavolombelon’i Jehovah ianao?
Hahita olona tena tia anao ianao any. Mahafinaritra ny fivorianay satria manahaka ny Kristianina voalohany izahay. Nozaraina ho fiangonana maromaro izy ireo. Niara-nivory ny fiangonana tsirairay mba hanompo an’Andriamanitra sy hianatra ny Soratra Masina ary hifampahery. (Hebreo 10:24, 25) Tena nahafinaritra ny fivorian’izy ireo, satria mpinamana be toy ny mpiray tam-po mihitsy ry zareo.—2 Tesalonianina 1:3; 3 Jaona 14.
Hianatra hampihatra ny torohevitry ny Baiboly ianao any. Toy ny mpanompon’Andriamanitra fahiny, dia miara-mivory daholo izahay na ny lehilahy na ny vehivavy na ny ankizy. Misy olona efa mahay Baiboly any mampianatra hoe ahoana no hampiharana ny torohevitry ny Soratra Masina eo amin’ny fiainana. (Deoteronomia 31:12; Nehemia 8:8) Afaka miresaka ny zavatra ampanantenain’Andriamanitra ny mpanatrika rehefa misy fiaraha-midinika. Miara-mihira koa ny rehetra.—Hebreo 10:23.
Vao mainka ianao hino an’Andriamanitra raha mankany. Rehefa miaraka matetika amin’ny mpiray finoana aminao ianao, dia lasa manam-pinoana bebe kokoa. Vao mainka koa ianao hankatò foana izay lazain’ny Baiboly. Hoy mantsy ny apostoly Paoly tamin’ny fiangonana iray fahiny: ‘Maniry mafy hahita anareo aho mba hisy fifampaherezana eo amintsika, ka mba hampahery anareo ny finoako ary ny anareo kosa hampahery ahy.’—Romanina 1:11, 12.
Tongava àry manatrika fivoriana amin’ny manaraka e! Ianao mihitsy amin’izay no hahita fa marina daholo izay voalaza teo. Horaisinay tsara ianao. Tsy misy vidim-pidirana sy fanantazan-drakitra any.
Mivory izahay satria manahaka an’iza?
Inona no soa horaisinao raha manatrika fivoriana ianao?
Raha te hitsidika ny trano fivorianay aloha ianao vao hivory, dia asaivo mitondra anao any izay Vavolombelon’i Jehovah fantatrao.
Fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah
Jereo hoe aiza izahay no mivory ary inona no ataonay any.
Inona no ho Hitanao any Amin’ny Fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah?